Eyga laacibka lagu la’yahay badda Channel-ka oo murugo la hor fadhiya albaabka gurigiisa… – Hagaag.com
Eyga laacibka lagu la’yahay badda Channel-ka oo murugo la hor fadhiya albaabka gurigiisa…
Posted on 6 Febraayo 2019 by Admin in Sports // 0 Comments
Walaasha xiddiga reer Argentine ee Emiliano Sala oo la la’yahay ayaa ku faafisay sawir naxdin iyo murugo leh baraha bulshada oo ku saabsan eyga walaalkeed oo fadhiya albaabka gurigiisa asaga oo sugaya inuu soo laabto.
“Nala ayaa sidoo kale ku sugeysa,” ayay ka xaradhay sawirka ay faafisay.
Sida ay sheegtay ciyaaryahanka walaashiis, xiriirka Sala uu la lahaa eygiisa waxay aheyd mid aad u weyn, eygan wuxuu ka mid ahaa sababihii xooganaa ee dib ugu celisay dalka Fransiiska kadib markii uu heshiiska Cardiff City la saxiixday, si uu u geeyo guryaha lagu xanaaneeyo eeyaha muddo gaaban, asaga oo ku talo jiray inay kula noolaato Wales.
Qoyska ayaa la fajacsan naxdin iyo murugo ka dib markii koox baaritaan Ingriis ah oo mas’uul ka ah baaritaanka socda ee kiiska Sala oo Isniintii hore helay meyd ku jira burburka diyaarada.
Saaxiib ku dhowaa weeraryahanka reer Argentine ee la waayey diyaaradiisa seddax Asbuuc ka hor intaanan laga helin badda Channel-ka ayaa shaaca ka qaaday sir cusub oo ku saaban dhacdada.
Laacibka ayaa ka soo baxay magaalada Nantes ee dalka Faransiiska, wuxuu ku sii jeeday magaalada Cardiff ee Wales 21kii bishii hore, si uu uga qeyb galo tababarka kooxdiisa cusub ee Cardif City, wuxuu ku soo wareegay adduun gaarayo 18 milyan oo euro.